Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Dhuusamareeb iyo Ciidamo tiro badan oo lagu soo daadiyay magaalada
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Iyadoo gelinkii dambe ee Sabtidii shsalay magaalada Dhuusamareeb lagu dhaariyay laba iyo toddobaatan ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa magaalada lagu soo daadiyay ciidan aad ufara-badan.
Ciidamada Dowladda ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay lagu soo daadiyay waddooyinka ugu muhiimsan isu socodka magaalada, si ay amniga u xoojiyan.
Wararka naga soo gaaraya magaalada magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegaya in xalay ay ka duwaneyd habeenadii la soo dhaafay, kadib markii ciidan fara-badan lagu arkay waddooyinka, isla-markaana ay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidkaba.
Sidoo kale, Ciidamada Dowladda ayaa si weyn u adkeeyay amniga Xarunta Shirkoole ee shalay lagu dhaariyay Xildhibaanada cusub. Xaruntan ayaa waxaa maalmaha ina soo aadan kulamo ku yeelan doono Xildhibaanada, si loogu diyaar-garoobo qaban qaabada Doorashada Guddoonka Baarlamaanka.
Dhanka kale, Xarunta Maamulka Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka bilowday kulamo loogu ololeynayo Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug iyo Kuxigeenkiisa (Guddoonka Baarlamaanka).
Wararka ayaa sheegaya in wakiilada dhinacyada siyaasadda dalka ay si weyn uga dhex muuqdaan kulamada ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb.
Doorashada ay sanadkan martigelinayso Magaalada Dhuusamareeb ayaa ka duwanaan doonto kuwii hore ee Galmudug, iyadoona si weyn loogu tartami doono loolanka loogu jiro Xafiiska Madaxtooyada.
Si kastaba, xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee wax dooranaya ayaa waxaa la leeyahay waxaa si muuqato loogu musuq maasuqi doonnaa Doorashada Madaxtooyada, oo dhaqaalihii ugu badnaana la fillaayo inay ku soo kala jiitaan dhinacyada isu haya siyaasadda dalka.
Tags: Ciidamada fara badan oo lagu soo daadiyay magaalada Dhuusamareeb, iyo amniga oo aad loo adkeeyay
Somalia holds memorial service for late diplomat
PM Kheyre and UN envoy discuss Somalia’s 2020 priorities (PHOTOS)
Somalia will in coming years become an oil producing country and build an industry that will create jobs and support economic growth, Ibrahim Ali Hussein, chairman and CEO of the…
Mudulood Conference: Elections must be held on time without term extensions
A Communique released on Thursday at the culmination of a three-day consultative clan conference has called for the federal government to hold timely elections without delay and to incorporate Banadir…